Danai @ + 91-993.702.7574 kuti uzive 15 yedu ku25 Seater Tempo Mufambiro Mutengo kuBhubaneswar
Ndichitsvaga rwendo rusina maturo kuenda kunzvimbo yako, kuBhubaneswar? Sandhu Makungu'ac Tempo Mutengo Wekufambira muBhubaneswar pasina mubvunzo ndiyo yakanakisisa. Basa raunowana ndiro rakanakisisa muguta. Kubhadhara Mutemo Mufambiro inzira yakanaka yekufamba kana iwe uri kufamba muboka. ac Tempo Mufambi anogona kunge ari mhando huru dzemotokari marefu / kure kure kana chero humwe humbo. Sandwich Pebbles 'inopa iyo yakanakisisa Tempo Mutashanyi Mutengo muBhubaneswar. Tinopa zvakasiyana-siyana zveTempo Traveler kune rendi kusanganisira Tata Winger 15, 17, 19, 21 seaters. Titi redu richakubatsira kuronga rwendo rwako rwakakwana pasina chero kutambudzwa. Vatyairi vedu vane ruzivo rwakadzika, vachiita chokwadi kuti rwendo rwenyu rwunofamba zvakanaka. Check Tempo Traveler Price in Bhubaneshwar kuti uwane maonero emabasa edu. Tinoisa pfungwa dzakawanda nekushingaira mukugutsikana kwekatevedzeri kuitira kuti vagone kuva nerwendo rwakanaka uye ruchizorora.
Kushanyira Odisha kwekutanga? Kana kuti ane zuva rokuona nzvimbo rakarongedzwa? Iwe unofanirwa kukoka 25 Seater Tempo Mufambi kana iwe uri kufamba muchikwata. Nezvakawanda zvekuona mu Odisha, kuhaya Tempo Traveler ndiyo nzira yakanakisisa yekuenderera nekuona zvose. Iva nechokwadi chekuchengeteka kwako nekunyaradza, munguva yorwendo, sezvo motokari dzose dziri kunyatsoongororwa vasati vatora mari.
24 hour Service- Tinopa 24-hour service kune vose vatengi vedu, pasina kunonoka. Isu tiri imwe yeTemple Best Traveler muBhubaneswar, kupa hutano hwemhando kune vatengi vedu.
Quality- Tinogara tichizvitsaurira kushumira vatengi vedu nekugutsikana kukuru. Yese Tempos yedu ndeye 5 nyeredzi dzakarongwa. Isu tiri moga kambani yekufambisa mutambo muIndia pamwe nekambani yebasa rinobudirira mubayiro kuburikidza neEuropean Foundation for Quality Management.
Driver Training & Safety- Tinoita kuti vatyairi vedu vave nekudzidziswa kwakanaka uye kuongororwa vasati vatumirwa kushanda. Tinoita kuti vatyairi vedu vave neKubatsirwa kwekutanga kwekukuvara kwezvinetso zvengozi. Temhepo imwe neimwe inoongororwa tisati tabva panzvimbo yedu.